ဘန်ကောက်မြို့တော် အမည်ပြောင်းလဲမှု ထိုင်းပြည်သူများအကြား ဝေဖန်မှု မြင့်တက်(ဝေဖန်မှာပေါ့ ပြောင်းလိုက်တဲ့နာမည်က ဖတ်လို့တောင်မရဘူး….) – Alanzayar
ဘန်ကောက်မြို့တော် အမည်ပြောင်းလဲမှု ထိုင်းပြည်သူများအကြား ဝေဖန်မှု မြင့်တက်(ဝေဖန်မှာပေါ့ ပြောင်းလိုက်တဲ့နာမည်က ဖတ်လို့တောင်မရဘူး….)
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်အမည်ကို ထိုင်းအစိုးရက တရားဝင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းပြည်သူလူထုတွေအကြားမှာ ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်နေပါတယ်။ မူလအမည် ဘန်ကောက် “Bangkok” မှ ခရုန်ထပ်မဟာနခွန်း “Krung Thep Maha Nakhon” အဖြစ်သို့ တရားဝင်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့ ထိုင်းဘုရင်နန်းတော်ကောင်စီရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် ထိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးများအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှ
သဘောတူကြောင်းဆုံး ဖြတ်လိုက်တဲ့နောက် ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်နေတာပါ။ ဒီလိုအမည်ပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထိုင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်သွားမလဲဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေလိုကြောင်း၊ BKK ဆိုတဲ့အမည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်လာဖို့အတွက် ၊
Amazing Thailand အဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြားဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာမှာ အခုလို ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာ အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ၊ ကာလဒေသနဲ့ မလျော်ညီကြောင်းနဲ့ မြို့တော်သစ်အမည်ကို နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီကို ပို့ပေးရာမှာ အားလုံးက ဝိုင်းဟားနေကြကြောင်း
ကျူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် စီးပွားရေးဌာန အငြိမ်းစားပါမောက္ခဒေါက်တာ ဆုမ်ကစ်အိုဆုခ်ဆဖားက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးပါတယ်။ မြို့တော်အမည်ပြောင်းဖို့ စပြီးစဉ်းစားသူဟာ
“စားလို့ဝပြီးရင် ပြဿနာရှာတာကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်တတ်” ဆိုတဲ့ တရုတ်ဆိုရိုးစကားတစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးလည်း အငြိမ်းစား ပါမောက္ခက ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်အမည်သစ်ပြောင်းခြင်းအားဖြင့် မြို့တော် အမည်ဆိုင်းဘုတ်တွေ အသစ်ပြင်ရေးရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်တွေ သန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမှာဖြစ်သလို
အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးစာတွေ အကုန်ပြန်ပြင်ရမယ့်အကြောင်း ၊ နဂိုစာလုံးရေ ၇ လုံးအစား ၁၉ လုံးထည့်သွင်းရမှာမို့ စာမျက်နှာ၊ မင်နဲ့ စာရိုက်ရမယ့်အချိန်တွေသာ ပိုကုန်မှာဖြစ်ပြီး ဘာမှအကျိုးမရှိတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ သေချာပြန်တိုင်ပင်ကြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ထိုင်းပြည်သူတွေကလည်း “အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ”၊ “ထိုင်းအစိုးရဟာ လုပ်သင့်တာကိုမလုပ်ဘဲ မလုပ်သင့်တာလုပ်နေတယ်”၊ “တကယ်ပြောင်းသင့်တာက ဝန်ကြီးချုပ်ပါ၊ မြို့တော်နာမည် မဟုတ်ဘူး ” စသဖြင့်
လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Forward ပါတီ အမတ်တစ်ဦးက ဦးဆောင်ကာ သဘောမတူကြောင်း ကမ်ပိန်းတစ်ရပ်ကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖွင့်လိုက်ရာမှာ အချိန် အနည်းငယ်အတွင်း ပါဝင်သူတွေ သိန်းချီသွားပါတယ်။
အခုလို ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ပြီးတဲ့နောက် အမည်သစ်နောက်မှာ ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ဘန်ကောက် ပြန်ထည့်တဲ့အကြောင်း အစိုးရဂဇက်က စာထပ်ထုတ်တဲ့အတွက် အမည်သစ်ပြောင်းပေမဲ့ အမည်ဟောင်းကို အသုံးပြုလို့လည်းရတယ်လို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။
ယခု ပြောင်းလိုက်တဲ့အမည်ဟာလည်း အသစ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲ ထိုင်းဘာသာ အမည်ဟောင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်အသုံးပြုခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မူလမြို့တော်အမည်ဟာ ထိုင်းဘာသာနဲ့ ခရုန်းထပ်မဟာနခွန်း အမွန်ရ တနာ့ကိုးစင်မဟင်တရာယုထယား မဟာတိလုတ်ဖုပ်နုတ်ဖလပ်ဌာနီဘုရီရမ် …….. စသဖြင့် စာလုံးရေတစ်ရာကျော်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းလူမျိုးတွေ အချင်းချင်းအကြားမှာတော့ ဘန်ကောက်မြို့တော်ကို “ခရုန်ထပ်” လို့ လည်း အတိုကောက် ခေါ်လေ့ရှိပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ဘန်ကောက်လို့သာ လူသိများတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article ၂၀၂၂မှာ ကံကောင်းမယ့် နေ့နံများ သင့်နေ့နံပါ မပါ ဖတ်ကြည့်နော်
Next Article “မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာ ဘုန်းကြီးအလည်နဲ့ တွေ့သောအခါ”…